रेश्मा, अझ अघि बढ्नु, खुसी मिलोस् - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
रेश्मा, अझ अघि बढ्नु, खुसी मिलोस् (फ्रन्टपेज : टिकटक दुनियाँ) । तिम्रा पाइला निरन्तर चालिरहून् ।
अमृता बास्तोला घिमिरे
पटक–पटक सत्तामा बसेका, मुलुककै नेतृत्व गरिसकेका थुप्रै नेतालाई फेरि पनि किन कुर्सीको मोह ? (समय सन्दर्भ : वृद्ध नेतृत्वले थलिएको देश) अब युवाका समस्या बुझ्न युवाहरू नै देशको नेतृत्वमा आउनुपर्छ ।
साप्ताहिकमा साताका सम्पूर्ण घटना पनि समावेश गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो कुनै स्तम्भ भए हप्ताभर भएका प्रमुख घटना बुझन सहज हुने थियो ।
म्यानहन्ट इन्टरनेसनलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी धुर्व बुढाथोकीलाई बधाई (म्यानहन्ट इन्टरनेसनलमा धुर्व) । यो प्रतिस्पर्धामा उनलाई सफलता प्राप्त होस् । नेपालको नाम राख्न सक्नुहोस्– शुभकामना ।
मिस सुप्रानेसनल–२०१८ मा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन लागेकी महिमा सिंहलाई–शुभकामना (सुप्रानेसनल २०१८ मा महिमा) । उनले नेपालको नाम राख्न अधिकतम मेहनत गर्नेछिन् भन्ने आशा छ ।
नाम चलेका संसारका प्रख्यात खेलाडीहरूको ट्याटु मोह अचम्मको रहेछ (खेलकुद : ट्याटुमय फुटबल खेलाडी) । जमैकाका स्टर्लिङको कथा पढेपछि मन झसँग भयो । सडकमा गोली हानेर उनका बुबाको हत्या गरिएपछि उनमा त्यसको कति गहिरो प्रभाव परेको रहेछ भन्ने कुरा उनको ट्याटुबाट प्रष्ट हुन्छ । गन कल्चरका विरुद्ध सामाजिक चेतना फैलाउने उनको प्रयास पक्कै सफल हुनेछ ।
नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक तान्न यस्ता खालका रोमाञ्चक खेलहरू थपिनु जरुरी छ (एड्भेन्चर्स : हट एयर बेलुनमा सरर) । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू तान्न हट एयर बेलुन जस्ता नयाँ–नयाँ खेल सञ्चालनमा आउनुपर्छ । उद्यमी एवं व्यवसायीहरूले पोखरा जस्तै नेपालका अन्य सहरमा पनि यस्ता खेलको सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
मस्र्याङ्दीमा सञ्चालित कायाकिङ प्रतियोगितामा नेपाल बाहेक बेलायत, नर्वे, क्यानाडा, स्वीडेन, स्पेनजस्ता थुप्रै देशले सहभागीता जनाउनु खुसीको कुरा हो (मस्र्याङ्दीमा कायाकिङ प्रतियोगिता) । पर्यटन विकासका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन भैरहनुपर्छ ।
विदेशमा बसेर साहित्य सिर्जना गर्नेहरूका बारेमा पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो (साहित्य : नेपाल बाहिर बसेर साहित्य सिर्जना गर्नेहरू) । जहाँ भए पनि नेपालीपनमै रमाउनेहरू सच्चा नेपाली हुन् ।
बाँदरका लागि पिकनिक ? (बाँदरका लागि पिकनिक ?) कस्तो अचम्मको समाचार ? थाइल्यान्डले पर्यटकहरूलाई यस्तो खालको कार्यक्रम आयोजित गरेको होला ।
श्वेता खड्का जस्ती प्रतिभाशाली अभिनेत्रीले सुस्ताउनु हँुदैन (सेलाइन् स्वेता) । कुनै न कुनै रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय भैरहनुपर्छ ।
नाम चलेकै कलाकारहरूले पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने अरू नयाँ कलाकारको स्थिति अझ के होला (पारिश्रमिक लफडा) ? निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने जस्तै उजुरी गर्नैपर्छ । आफ्नो कामको पारिश्रमिक लिनैपर्छ । कसैले कसैको शोषण गर्नु हुँदैन ।
बलिउडका डिभोर्स पनि यति महँगा (बलिउडका महँगा डिभोर्स) ? डिभोर्स गर्ने महिलाहरूका सर्त पढेर अचम्म लाग्यो ।
हिमालय रोडिजको उपाधि हात पारेकोमा आयुश श्रेष्ठलाई बधाई (सानो पर्दा : आयुशलाई हिमालय रोडिज) ।